"Xukuumada Muuse Biixi Sinaba Uma Loodin Karto Isbahaysiga Mucaaridka"..Xoghaye Baashe Cabdi Gaboobe
Sunday July 18, 2021 - 10:11:35 in News by G. Good
Hargeysa(HWN):-Baashe Cabdi Gaboobe oo ka mid masuuliyiinta xisbiga mucaaridka ah ee Ucid ayaa sheegay in xukuumadu aanay marna ka guulaysan karin isbahaysiga mucaaridka oo qorshe ka yeeshay doorashada shirgudoonka golaha wakiilada.
Baashe Cabdi Gaboobe ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu kaga waramay halka uu marayo tartanka shirgudoonka golaha wakiiladu iyo heerka ay mucaaridka iyo muxaafidku isla gaadheen waxaanu qoralkiisu u dhignaa sidan:-
Doorashada isku sidkan ee golaha wakiilada iyo degaank ee ka qabsontey Somaliland 31 May, 2021. Waxey u dhacdey si nabad gelyo iyo farshaxan leh sida caadada u aheyd doorashooyinka Somaliland iyado la adeegsaday qaabka casriga ah ee Bio-metric.
Shacabku waxey hiirti hore ba u dareereen goobaha loo cayimey iney ka codeeyaan oo safaf dhaadheer u galeen, iyago in badan ka soo horeyeey guddida doorashooyinka, kuwaaso bilaabey codeeynta 730 subaxnimo halkey aheyd iney bilaabaan 6 subaxnimo. Laakiin nasiib wanaag gelinki dambey safafki dhaadheera mey badneyn. Markey dhamaatey tirinti codadka ee goobaha, waxey muraaqibinti soo tebiyeen in labada xisbi mucaarid marka la isku geeyo ay codad aqlabiyad ah ka heleen labada gole. Waliba, gaar ahaan golaha wakiilada xisbiga Waddani ba ka codad batey xisbul xaakimka Kulmiye. Waddani 31 xubnood, Kulmiye 30 xubnood. Ucid 21 xubnood. Waana marki u horeysey ee xisbi mucaarid ah ka wakiilo bato xisbul xaakim.
Doorashadi golayaasha deegaanka, degmo walba waxa ku guuleystey innu ka noqdo mayor iyo mayor ku xigeen isbaheysiga mucaaridka ee xisbiga Waddani iyo xisbiga Ucid marka laga reebo Gabiley, Berbera iyo dhawr degmo yar yar mooye’. Haddaba doorashadi golaha wakiilada ee ka dhacdey Somaliland 2005. Kulmiye wuxu heley 28 wakiil, Ucid 21 wakiil iyo Udub 33 wakiil. waxa isbaheystey labada xisbi mucaarid, Kulmiye iyo Ucid. . Sidaana ku hantey shir guddoonki golaha wakiilada. Maah maah Ingiirisi ah ba tidha ‘’ History repeats itself ‘’ oo macnaheedu yahey dhacdooyinka taariikhigu wey soo noq noqdaan ‘’. Maah maah carbeedna waxey tidha ‘’ ما أشبه الليلة بالبارحة ‘’.
Mar haddi lagaga adkaadey xukuumadda Kulmiye golayasha deegaanka, loolanka weyni wuxu usoo wareegey shir guddoonka golaha wakiilada oo ah qeybta ugu muhimsan dhadhaarki sharci dejinta ( golaha wakiilada + golaha guurtida= Golaha Barliamanka ) ee loogu talagaley xakameeynta, la xisaabtanka iyo isu dhelitirka awoodda dawladdnimo.